မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-04 > ဘုရားသခင့စိတ်ခံစားမှုဖြစ်ပါသည်
"ဘုရားကျောင်း sissies အဘို့ဖြစ်၏။ "
သငျသညျဖြစ်ကောင်းဤဖော်ပြချက်ကြားဖူးကြပြီ စိတ်ခံစားမှုတွင်အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုသူတို့ထင်မြင်ကြသည်။ သူတို့ကပြောတာကမင်းဟာမင်းဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့နဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ခိုင်မာသော၊ လူတစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်သင်၏ခံစားချက်မရှိဟုဟန်ဆောင်ရမည်။ စီးပွားရေးလောကတွင်အောင်မြင်လိုသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ခက်ခဲသော၊ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်နေရာမရှိပါ။ ဒါတကယ်လား? ငါတို့ဟာစိတ်ခံစားချက်ရှိသင့်သလား၊ ခံစားချက်အနည်းငယ်သာပြသလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ ပို၍ ပုံမှန်လား။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ သူကငါတို့ကိုစိုးလ်၊ စိတ်ခံစားမှုသတ္တဝါအဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တာလား၊ မဖန်ဆင်းခဲ့တာလား။ အချို့ကယောက်ျားများသည်စိတ်ခံစားမှုနည်းပါးသောကြောင့်ဘုရားသခင်အားလူသားများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါများအဖြစ်မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကယောက်ျားများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစွဲချက်တင်မှုနည်းပါးပြီးအမျိုးသမီးများသည်လည်းစိတ်ခံစားမှုများပြားသည်ဟုဆိုကြသည်။
Die Menschen wurden als Ebenbild Gottes erschaffen. Doch was für ein Bild ist das eigentlich? Paulus sagte über Jesus: «Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung» (Kolosser 1,15). Um zu verstehen, wer wir als Ebenbild Gottes sind, müssen wir uns Jesus anschauen, weil er das wahre Ebenbild Gottes ist.Unsere wahre IdentitätSatan, der Täuscher, wollte uns schon von Anfang an über unsere wahre Identität täuschen. Ich glaube, auch die Gefühlswelt ist ein Teil unserer Identität und Satan will uns in Bezug auf unsere Gefühle täuschen. Er versucht uns im Glauben zu lassen, es sei schwach und dumm, Gefühle wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben. Paulus sagte über Satan, er habe den Ungläubigen [ ] den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Lichtdes Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes (2. ကောရိန္သု 4,4).
မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ခံစားမှုပြုရန်ခွင့်ပြုပါ။ ထိုသို့လူသားဖြစ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်သည်။ စာတန်ကိုသင့်ကိုလူမဆန်အောင်လုပ်ခွင့်မပြုပါနှင့်။ မှန်ကန်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ခံစားမှုများကိုခံစားရရန်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဆုတောင်းပါ။ မြင့်မားတဲ့အစားအစာဈေးနှုန်းနဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ တီဗွီနှင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းများကကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များကိုသေစေနိုင်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသတ်ခံရသောခရစ်ယာန်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှမခံစားရတော့သည့်အထိရောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုကိုတီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်၊ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီနှင့်အီဘိုလာကြောင့်ကလေးငယ်များမိဘမဲ့ကလေးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
အပြစ်နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြproblemsနာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုပျက်ပြားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာငါတို့မသိတော့ဘူး။ ခမည်းတော်သည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုပျောက်ကင်းစေပြီးသင်၏ခံစားချက်များကိုသခင်ယေရှုခံစားစေပါစေဆုတောင်းပါ။ ယေရှုငိုခဲ့သည့်အရာများအတွက်သင်ငိုနိုင်သည်၊ ယေရှုအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သူများကိုအမျက်ထွက်ကာယေရှုနှစ်သက်သောအရာများအပေါ်စိတ်အားထက်သန်ပါစေ။
Takalani Musekwa ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်